Manao ny famoahana rakitra amin'ny Linux Software
Software Publishing Desktop
Tetikasa fanontana fanontana Desktop an'ny Linux
Tsy tahaka ny Mac sy Windows, dia misy programa kely vitsy monja amin'ny famoahana ny desktop. Fa raha Linux no OS tianao kokoa, ary te-hamorona solosaina, brochures, taratasim-bola, karatra fandraharahana, ary ny toy izany, dia omeo ny iray amin'ireo fandaharam-potoana ireo. Noho ny tsy fisian'ny Linux maro, ity lisitra ity dia ahitana rindrambaiko maimaim-poana sy lohateny ho an'ny Linux izay matetika ampiasaina miaraka amin'ny famoahana ny Desktop na mamokatra tetikasa fanontam-pirintin'ny Desktop.
Laidout 0.096 ho an'i Linux
Fandaharam-panomanana pejy nataon'i Tom Lechner, tetikasa SourceForge.net. Jereo ity tabilao fampifanarahana ity ho an'ny Laidout, Scribus, InDesign, ary fandaharana hafa. "Laidout dia rindrambaiko fanontam-pirinty natao ho an'ny rindrankajy, indrindra ho an'ny multipage, horonan-taratasy mifintina sy nofatorana, miaraka amin'ny loha-pejy izay tsy voatery ho marim-pototra." Bebe kokoa "
SoftLogik / Grasshopper LLC: PageStream
PageStream 5.8 ho an'ny Linux (sy Mac, Windows, Amiga, MorphOS)
Famoahana sehatr'asa sy seho pejy ho an'ny sehatra maro avy amin'ny Grasshopper LLC. Misy ihany koa ireo fitaovana fampidiran-tserasera. Bebe kokoa "
Pejy layout mampiasa Scribus. © Dan Fink
Scribus 1.5.2 ho an'i Linux (sy Mac, Windows)
Azo inoana fa ny fampiharana rindrambaiko fanontam-pirinty malalaka voalohany. Manana ny endrik'ireo fonosin'ny pro izy, saingy afaka izany. Scribus dia manolotra CMYK fanohanana, fanamafisam-peo ary fametahana, famoronana PDF, EPS import / export, fitaovana fanoratana fototra, ary ireo asa hafa amin'ny sehatra matihanina. Izy io dia miasa amin'ny lamaody mitovy amin'i Adobe InDesign sy QuarkXPress miaraka amin'ny raki-tsoratra, palettes misidina, ary menus mihodinkodina - ary tsy misy ny mari-pankasitrahana.
Bebe kokoa "
GIMP 2.8.20 ho an'ny Linux (sy Windows, Mac, FreeBSD, OpenSolaris)
Ny GNU Image Management Program (The GIMP) dia malaza, maimaim-poana, loharanom-baovao malalaka amin'ny Photoshop sy rindrambaiko hafa fanontana sary. Bebe kokoa "
Inkscape 0.92 ho an'ny Linux (ary Windows, Mac, ary dia hihazakazaka amin'ny FreeBSD, rafitra Unix)
Ny programa malaza maimaim-poana sy maimaimpoana malalaka , Inkscape dia mampiasa ny format-drakitry ny ordinatera Scalable Vector Graphics (SVG). Ampiasao ny Inkscape amin'ny famoronana endritsoratra sy sarimihetsika anisan'izany ny karatra fandraisam-bahiny, ny bokotra, ny flyer, ary ny doka. Inkscape dia mitovitovy amin'ny fahaiza-manaon'ny Adobe Illustrator sy CorelDRAW. Ny Inkscape dia ampiasaina ihany koa hamoronana endritsoratra. Bebe kokoa "
Ahoana ny fomba fanoroana tsanga-tarehim-bola mivantana sy ny fivadiham-panambadiana
Porofo marim-pototra manakana ny fanontana Snafus
Comps amin'ny Graphic Design sy Printing
Mampifanaraka ny toerana eo amin'ny tarehin-tsoratra, ny teny ary ny teny
Ny gazety Newsprint dia manana fandaniana kely sy ambany
Mianara manoloana ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona
Ahoana ny fomba handaminana ny mason-tsivana
Ahoana ny fomba fanehoana toetra miaraka amin'ny mari-pamantarana mazava
Aiza no misy ny rakitra voarakitra ao amin'ny Internet?
Facebook Tips: A Guide to Facebook
9 Free Tools ho an'ny mpizara disk space
Ny fomba hiarovana ny tenimiafonao amin'ny fanalana aina
Top VoIP Headset
Ny 8 tsara mozika tsara indrindra amin'ny mividy amin'ny 2018
Ahoana ny fametrahana BASH amin'ny Windows 10
Ny 8 Best Cameras Famaranana Hividy ny 2018
Ny 7 Best Sony TVs mba hividy amin'ny 2018
Ahoana ny fitsapana ny CPU Temperature
Inona no atao hoe TDMA? Famaritana ny TDMA
Ny fotoana fitadiavana ny fampiharana ny vokatra
Ahoana ny fanontana mailaka ao amin'ny Outlook Mail amin'ny Internet
VoxOx Review - Hanambatra ny fifandraisana amin'ny serasera rehetra
Scribe 1.88 - Programa mailaka
127.0.0.1 Ny adiresy IP dia manazava
Inona no atao hoe Computer Networking?
Ahoana ny fampiasana WhatsApp amin'ny solosainao na ny solosaina Desktop
37 Mpanadio maimaim-poana
Ahoana ny fananana fanamarihana farany ao amin'ny Teny 2010
Top 5 Top Free CAD Programa ho an'ny 2018